उज्ज्वल थापाः कोभिड भएर गम्भीर बिरामी परेका बेला देशविदेशबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले दिएको सन्देश के हो? - Aadil Times
१९ करोड बजेटमा बन्दिपुरमा यस्तो बन्दैछ मिनी ग्रेटवालसँगै पदमार्ग आजबाट मौसममा सुधार हुन्छ, धेरै ठाउँमा घाम लाग्छ : मौसमविद् २२ घन्टापछि कोसी राजमार्ग खुल्यो धरान-धनकुटा सडक खण्ड एकतर्फी खुल्यो वर्षाका कारण कुन सडक बन्द, कुन सडक खुला ? पानी परेन भने बिहीबार साँझ सम्ममा मात्रै बिजुली आउँछ : ग्रिड प्रमुख रेग्मी
उज्ज्वल थापाः कोभिड भएर गम्भीर बिरामी परेका बेला देशविदेशबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले दिएको सन्देश के हो?
१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १३:१३ | Aadil Times
कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका कारण गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेका विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वसंयोजक उज्ज्वल थापाप्रति देश तथा विदेशबाट व्यक्त सद्भाव उनको राजनीतिक र सामाजिक कामको परिणाम भएको चर्चा भइरहेको छ।
राजनीतिक मामिला र समाजशास्त्रका विज्ञहरूका अनुसार स्वतःस्फूर्त रूपमा थापाको स्वास्थ्य उपचारका लागि देशविदेशबाट जुटेको आधा करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोगको अर्थ त्यस्तो रकमभन्दा पनि धेरै अर्थपूर्ण छ।
आफूलाई राजनीतिक अभियानकर्मी बताउने थापाको अध्यक्षतामा सन् २०१३ मा विवेकशील नेपाली पार्टी स्थापना भएको थियो। उनले सन् २०१९ को अक्टोबर महिनामा उक्त जिम्मेवारी छाडेका थिए।
कोभिड-१९ भएपछि जेठ महिनाको सुरुमा अस्पतालमा भर्ना भएका उनको पछिल्लो अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।
कोभिड-१९ कारण अत्याधुनिक प्रविधिबाट उपचार गराउनुपर्ने अवस्था देखिएपछि उनको परिवारको सहमतिमा आर्थिक सहयोग जुटाउने अभियान चलाइएको थियो।
त्यसमा २४ घण्टाभित्र “गोफन्डमी” मार्फत् २२,२९१ डलर र नेपाली ब्याङ्कको खातामा झन्डै २६.५ लाख रुपैयाँ गरी कुल ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग सङ्कलन भएको उनका सहयोगीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र भन्छन्, “धेरै मान्छेलाई उहाँ असल र भलाद्मी लाग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। उहाँ आफैँ समाजिक कार्यकर्ता भएको धेरै मानिसहरूले अनुभूत गरे। भुइँचालो गएको बेला र त्योभन्दा अघि पनि।”
मिश्रका अनुसार “आफ्नो पार्टी पनि खासै नभएको र पार्टी जे छ त्यो धनी पनि नभएको” अवस्थामा उनलाई आफ्ना पूर्वसहकर्मीबाट दह्रो साथ र समर्थन प्राप्त भएको बुझ्न सकिन्छ।”
उनले भने, “उहाँले बूढानीलकण्ठ विद्यालयमा अध्ययन गर्नुभएको हो। त्यहाँ पढेका उनका साथीहरूले पनि सहयोग गरे जस्तो लाग्छ। नेपाल सँगसँगै विदेशमा हुनेहरूले पनि साथी भनेर सहयोग पठाएको देखिन्छ।”
व्यक्तिगत गुण र सामाजिक कार्यकर्ताको छवि बनाएको हिसाबले देशभित्र पनि उल्लेख्य सहयोग सङ्कलन भएको उनको मिश्रको ठहर छ।
“अहिले अलिक अलग हुन थाले पनि पहिला सामाजिक कार्य गरेर उठ्ने लक्ष्य नै विवेकशील दलको थियो र उहाँले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो। उहाँको व्यक्तिगत सादगीले पनि भूमिका खेल्यो जस्तो लाग्छ।”
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले लाभको पदमा नपुगेका तर उदीयमान र स्वच्छ नेताको छवि बनाएकाले थापाप्रति यस्तो प्रकारको सकारात्मक सोच र सद्भाव व्यक्त भएको टिप्पणी गरे।
युवा पुस्ताका नेता
चवालीस वर्षीय थापा देशका अरू राजनीतिज्ञका भिडमा एक खालको ‘अपवाद’ भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागकी उपप्राध्यापक नीति अर्याल खनाल बताउँछिन्।
उनले भनिन्, “विभिन्न किसिमका सङ्घर्ष गरेर आएका र जनताले विश्वास गरेका नेताहरू विभिन्न किसिमका राजनीतिक खिचातानी र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा जनताले उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम नकारात्मक भएर गएको छ।”
त्यसबाट सहरी मध्यमवर्गको ध्यान तान्न सफल भएको र पछिल्लो समय जुटेको सहयोगले थापालाई प्राप्त समर्थन देखाउन उनले बताइन्।
“युवापुस्ता परिवर्तनको भोका छन् र उनीहरू उज्ज्वलजस्ता नेताहरूले केही गर्न सक्छन् र उहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू निको भएर छिटो समाजसेवामा फर्किनुभयो भने हाम्रो लागि सम्भावना छ भन्ने ठान्छन् भन्ने देखाएको छ। यो एकदमै अर्थपूर्ण छ।”
प्रविधि उद्यमी हुँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेका थापाले अमेरिकाबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका छन्।
थापाको पछिल्लो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ?
पछिल्लो स्वास्थ्य रिपोर्टमा थापा कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको देखिएको तर अवस्था गम्भीर नै रहेको थापानिकट आलोक सुवेदी बताउँछन्।
थापासँग लामो समयसँगै काम गरेका विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेका अनुसार राजधानीको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका थापाको “स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर” छ।
पाण्डेले भने, “चिकित्सकहरूले परिवार र शुभेच्छुकहरूलाई दिएको जानकारीअनुसार उहाँको अवस्था जटिल नै छ। ”
उनी थापालाई अरूको जीवनमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने लक्ष्य बोक्ने नेताका रूपमा चिन्छन्।
उनले भने, “सत्तामा पुगौँला र ठूलो नेता बनौँला भन्ने उहाँको व्यवहारमा कहिल्यै थिएन। उहाँ अरूलाई प्रेरणा दिने र उत्प्रेरणा जगाउने खालको व्यक्ति हो। अहिले उहाँले प्राप्त गर्नुभएको सहयोग र शुभेच्छा उहाँले गर्नुभएको सङ्कल्पको परिणाम हो।”
मेडिसिटी अस्पतालका एक जना अधिकारीले थापाको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा कुनै सूचना उपलब्ध गराउने अनुमति आफूसँग नभएको जनाएका छन्।
संविधानको पूर्णताले मुस्लिम समुदाय लाभान्वित हुने : सेराज फारूकी
संविधान कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पहल जारी छ: कलिला खान
संविधानदिवसको रोदन ;शमशाद आदिल